राजनीति र कूटनीतिमा सन्तुलन आवश्यक छः डा.सूर्यराज आचार्य
On: २०७६ श्रावण ४ गते, शनिबार, ०९:२५ बजे प्रकाशित
साझा पार्टीले कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्ने सवालमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको बताएको छ। पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले भोलि पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गर्नुपरे यस्ता समस्या नआउन भनेर नै आफ्नो पार्टीले कूटनीतिक निर्देशिका जारी गरेको बताए।
यो पनि पढ्नुहोस-‘डिप्लोम्याटिक प्रोटोकल’को पालना भएनः नारायणकाजी श्रेष्ठ
डा. आचार्यले नेपालमा पुराना राजनीतिक दलहरूले गरेको कूटनीतिक कमजोरीकै कारण बेलाबेलामा सार्वभौमिकता माथि नै आँच आउने खालका क्रियाकलाप हुने गरेको बताए। राजनीति र कूटनीति दुवैलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउन सकिएन भने देश दुर्घटनामा पर्ने खतरामा पर्ने आचार्यले टिप्पणी गरे। आपूmहरुले जारी गरेको कूटनीतिक निर्देशिकाले दिन खोजेको सन्देश र यसको राजनीतिक महत्वबारे आचार्यले लामो व्याख्या गरे।
यो पनि पढ्नुहोस-नेताहरु नै पालना गर्दैनन्, कूटनीतिक आचारसंहिता!
साझा पार्टीको कूटनीतिक निर्देशिकाबारे प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले गरेको व्याख्याको सम्पादित अंशः
हामीले जारी गरेका कूटनीतिक निर्देशिकाको मूल सन्देश चाहिँ के हो भने, कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिले त्यसको परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्छ । तर, हाम्रोमा विडम्बना के भयो भने, हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूको उनीहरूको नेपालसम्बन्धी परराष्ट्र नीतिले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा निर्धारण गरेको घटना परिघटनाले त्यो देखाइरहेको छ । त्यो चाहिँ देशको उन्नतिको लागि, समृद्धिको लागि, सुशासनको लागि राजनीतिक स्थिरताका लागि भएपनि त्यो जायज कुरा होइन । त्यसैले यत्ति लामो राजनीतिक संक्रमण पछि हामीले स्थायी सरकार पायौँ । त्यसमा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सरकारको गुनासो सुनाउने साथै अहिले मिडियाहरूमा केही हप्तादेखिको चर्चामा रहेका कुराहरू हेर्यो भनेपनि यत्रो दुईतिहाइ सरकार हुँदा पनि अझै सत्ता समीकरणको परिवर्तनको चर्चा हुनु, अब त्यहाँमाथि केही दिनमाथि हुन न यो पुरानो निरन्तरतादेखि नै चलिरहेको कुरा हो ।
यो पनि पढ्नुहोस-कूटनीतिक मर्यादाको संवेदनशीलता बुझ्ने नेता छैनन्ः सूर्यनाथ उपाध्याय
एउटा विदेशी कूटनीतिज्ञ आउने यहाँको वरिष्ठ नेताहरूलाई अपारदर्शीका खालको भेटघाट गर्ने यो क्रम केही वर्षदेखि नै हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको निर्धारित फ्याक्टर चाहिँ विदेशीहरूको भू–राजनीतिक चासो र उ उनीहरूको चलखेलबाट हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको सत्ता समीकरणसमेत निर्धारण हुनु यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण यो प्रवृत्ति चाहिँ केही वर्षयता देखि चलिरहेको छ । यसमा अब साझा पार्टीले समृद्ध, सुशासन, तथा भ्रष्टाचारमुक्त समाज यी सबै कुराहरूको जगमा हामीले पार्टी राजनीति नयाँ अभियान सुरु गर्दा पार्टी गठन हुँदा नै हाम्रो एउटा बुझाइ र एउटा निष्कर्ष के रहेको थियो भने, खासगरि हाम्रो परराष्ट्र नीति के हुने भन्नेमा त यसमा त्यति धेरै विवाद छैन । हाम्रो दुई ओटा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुनु, अरु मित्र राष्ट्रहरुसँग पनि आपसी हितका विषय, विश्व शान्तिको हिसाबमा अहिलेको क्लाइमेट चेञ्जको विषय हाम्रो के हुने भत्रेकुरामा लगभग सबै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मुद्दाहरूमा र बृहत् राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति कस्तो हुने भन्नेबारेमा लगभग अब दस्तावेजको रुपमा हेरियो भने सबै पार्टीका समान धारणा रहेका हुन्छन् । सैद्धान्तिक पाटोको यो धेरै विवाद छैन । फरक दल भएपछि केही मसिना कुराहरूमा होला । त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने, परराष्ट्र नीति भनेको दलको नीति हुन हुँदैन । राष्ट्रको एउटै नीति हुनुपर्छ । त्यसमा असहमति भएको कुराहरूमा पनि सबै राजनीतिक दल एक हुनुपर्छ । हामी त्यसमा खासै समस्या देख्दैनौ। तर, समस्या कहाँ भने, खासगरि दलका वरिष्ठ नेताहरू सरकारकै मन्त्रीहरू लगायतको विदेशी दूतावास र विदेशी कूटनीतिकहरुसँगको सम्पर्क र सम्बन्धको एउटा अभ्यास र अब त्यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वार्थमै घात पर्ने किसिमको एकदमै असान्दर्भिक भयो ।
अब त्यो अहिलेकै परिप्रेक्ष्यमा अझ त्यति नै गम्भीर भएर त्यो मुद्धा आएको छ भने, अहिले हाम्रो दुईओटै छिमेकी देशहरू संसारकै आर्थिक शक्ति तथा सामाजिक शक्ति सबै तवरबाट उदयमान छन् । र त्योभन्दा बाहिरका विश्व शक्तिहरू पनि एउटा अन्तराष्ट्रिय विभाग नीतिको आ–आफ्नो उनीहरूको दृष्टिकोणहरू छन् । त्यस्तै भूराजनीतिको एउटा पेचिलो दाउ यो एशिया मै चलिरहेको त्यो स्पष्ट छन् । अब त्यो सन्दर्भमा हामीले त्यो विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको राजनीतिक दाउपेचहरूको त्यो सन्दर्भमा हामीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ, सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गर्ने्तिर हाम्रो राष्ट्रनीति र हाम्रो नेताहरुको, सरकारको संयन्त्रमा रहेको ती डिप्लोम्याटिक अभ्यास पनि त्यतातिर जानुपर्ने हो ।
तर, भर्खरै पनि एउटा समाचार बाहिरिएको छ । अहिलेका भरोसामान मानिएका नेताको पनि, म नाम लिन चाहान्न । उहाँको स्पष्टिकरण देख्दा पनि त्यो दिक्क लाग्दो छ । एउटा कुनै विदेशी राजदूत, राजदूतावासले पर्सनल कन्ट्याक्ट भनेको त्यो डिप्लोम्यााटिक अर्थमा सानो कुरा होइन । अब त्यो विशेषण प्रयोग गर्न एम्बेसीको पक्षबाट ठिक थियो कि थिएन अथवा उहाँको कस्तो प्रकारको सम्पर्क थियो त्यो हामीले जान्ने कुरा होइन । तर, वास्तविकता के हो भने, राजदूतावासले पठाएको गोप्य डकुमेन्टमा केही नेताहरूका बारेमा विभिन्न किसिमको विशेषण लगाइएका कुराहरू सार्वजनिक भयो । र, त्यो तहका राज्यका, सांसदका तथा दलका नेताहरुको बारेमा राजदूतावासहरुले त्यस्तो विशेषण प्रयोग गर्न र त्यसलाई उहाँहरुको जुन सम्पर्क त्यो के हो भन्ने त्यो छुट्टै पाटो हो । तर, आम नागरिककले त्यसलाई हेर्दाखेरि वान्छनीय कुरा पक्कै होइन । तर, त्यो भन्दा पनि अचम्मको कुरा के भने, एकजनाले नेताले सार्वजनिक रुपमा स्पष्टिकरण दिँदा उहाँको स्पष्टिकरणको भाषा र शैली र अझ स्पष्टिकरणको संकेत हेर्ने हो भने त्यो अझ गम्भीर किसिमको छ । यो त के ठूलो कुरा भयो, उसलाई पनि लेखेको छ । अर्कोलाई पनिलेखेको छ । त्यो के ठूलो कुरा भयो?मेरो धेरै देशहरुसँग यस्तो सम्बन्ध छ । भन्नु त्यो किसिमको गैरजिम्मेवारी?
एउटा सांसदको तहबाट कुनै पनि राज्यको पदभारबाट त्यो किसिमको अभिव्यक्तिले के देखाउँछ भने, त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनेलाई पनि कूटनीतिक आचार संहिता के हो? कूटनीतिक मर्यादा के हो? भन्ने कुरा थााहा नभएको होकी? प्रश्न उठ्छ । उहाँजस्तो होसियार अनि भरोसामान नेताको यस्तो हुनुहँदैन । किनभने हेर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा सांसद विदेश जानुपर्यो भने, कुनै पनि देशको एउटा सामान्य प्रोटोकल के हुन्छ भने, त्यो कुन इभेन्टमा जाने हो? त्यो इभेन्ट कसले अर्गानाइज गरेको? त्यसको उद्देश्य के हो? त्यसको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ब्रिफिङ दिनुपर्छ । अझ यो गम्भीर कुरा किन हो भने, हाम्रो दुई छिमेकीहरु विश्वमा उदयमान शक्तिको रुपमा छन् । यस्ता अन्तराष्ट्रिय सभा, सम्मलेन, गोष्ठी, कुनै संघसस्थाले बोलाएको निम्तोमा त्यहाँ सहभागी जनाउने व्यक्तिहरुको बारेमा हाम्रा छिमेकीहरुको पनि छुट्टै चासो हुन सक्छ ।
अनि हाम्रा सांसदहरुको शैली कस्तो भयो भने, फ्रिमा टिकट र बाटो खर्च दिइयो भने, जहाँ पनि गइदिने अनि त्यसपछि त्यसरी जाँदाखेरि त्यो कसले अर्गानाइज गरेको कस्तो छ? इभेन्टमा अरु कस्तो मान्छेहरु आउने आउँछन्? भन्ने कुराको यकिन जानकारी नलिइकन जाँदाखेरि त त्यसले त अरु देशले हाम्रो देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन सक्छ । जस्तो कि, त्यस्तो कुरा परराष्ट्रसँग अथवा पाार्टीको संयन्त्रसँग त्यो कस्तो संस्था हो? कहाँ जाने हो? के काम गर्ने हो? भनेर कमसेकम न्यूनतम ब्रिफ्रिङ दिने लिने पद्धति भयो भने पनि यस्ता घटनाहरुलाई घटाउन सकिन्थ्यो । तर, यहाँ त के भयो भने, जिम्मेवार दलका जिम्मेवार नेताहरूनै कूटनीतिक मर्यादालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। हो अहिले हाम्रो सरकारकै संयन्त्र पनि त्यो चाहिँ श्रोतसाधन के कारणले होला? त्यो हुनुपर्नेजस्तो छैन । तर, अब कहीँबाट गल्ती भयो भने, हैन अब त हामी सुध्रिन्छौं । त्यसबाट पाठ सिक्यौं । यो राम्रो कुरा होइन । मबाट पनि गल्ती भयो तर, अब यसलाई सुधारौं । पार्टीमै परराष्ट्रमन्त्रालयमै एउटा निर्देशिका बनाऔं भन्ने त्यो तर्फचाहिँ लक्षित छैन । खाली मैले गल्ती गरें भने अर्को पार्टीको अर्कै ठूलो नेताले झनै ठूलो गरेको छ भन्ने । अनि यसरी देखाएर हाम्रो राष्ट्रिय स्वााभिमान र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षपोषण त हुँदैन । त्यसैले यी सबै कुराहरुलाई दृष्टिकट गरेर हाम्रो पार्टी साझाले जसले एउटा सु–संस्कृत राजनीति एउटा प्रभावकारी राज्य जनताप्रति जनउत्तरदायी हुने राज्य विकास, समृद्धि, सुशासन, यी यावत् कुरामा हामीले के चाहिँ हाम्रो बुझाई हो । यी सबै कुराहरूमा उल्लेख्य परिवर्तन चाहिन्छ । त्योमध्ये यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई कसरी त्यसको अभ्यास गर्ने?
खासगरि हाम्रा नेताहरुको र हाम्रा राज्यमाा भएका उच्चपदस्थ मन्त्री, कर्मचारीहरुको यहाँको विदेशी नियोग, र विदेशी कूटनीतिकसँगको संवाद र सम्पर्कको कस्तो अभ्यास हुनुपर्ने हो? भन्ने कुरालाई त्यसलााई नसच्याइकन विदेशी चलखेल हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा सुधार्नको लागि कठिन छ, भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो । र त्यसैको कडीको स्वरुप हामीले हाम्रो यो पार्टीको आन्तरिक उपयोगको लागि मात्र नभएर यो देशकै भलोको निम्ति यो निर्देशिका जारी गर्यौं । र त्योसँगैं यो निर्देशिका जारी गरेर हामीले के पनि अपेक्षा गरेका छौं भने, यहाँका मिडिया, यहाँको नागरिक समाज, र आम वुद्धिजीवि साथै आम जनतामा पनि यो एउटा बहसको विषय बनोस् । यसमा, हुन सक्छ, हामीले यो गर्नै नपर्ने यस्ता खालको सतर्कता हुनै नपर्ने, उहाँहरुले गरेका अभ्यास हाम्रै । प्रधानमन्त्रीका बेडरुमसम्म रााजदूत पुग्ने, राजदूतले बोलाएपछि हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू जाने, अब लोकतन्त्रमा त्यही नै अभ्यास ठिक हो, हामी बढी नै प्रतिक्रिया भयौं, यहाँको आम वुद्धिजीवि, यहाँको डिप्लोम्याटिक विज्ञहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले हैन अहिलेका दलहरूले गरेकै अभ्यास ठिक छ, साझा पार्टी अलिक बढी नै प्रतिक्रियात्मक भयो भन्नुहुन्छ नै भएपनि ठिकै छ । तर, अब हामीले केही विज्ञहरुसँग थोरै यसको गृहकार्य गरेर कूटनीतिक जानकारहरु, परराष्ट्रसँग समेत एउटा फिडब्याक लिएर हामी यो पार्टीको निर्देशिका जारी गरेका हौं । अब यसले हाम्रो आन्तरिक पार्टी्भित्र मात्रै होइन । मुलुकमै यसले एउटा बहसको विषय सिर्जना गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
२०७६ श्रावण ४ गते, शनिबार, ०९:२५ बजे प्रकाशित